Fintin'ny vaovao talohan'ny 26 mey 2021 - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tranga “coronavirus”, mihena miandalana raha ny antontanisa ofisialy
Mihena isan’andro ny isan’ny tranga momba ny “coronavirus” eto amintsika raha ny antontanisa ofisialy avoaka amin’ny haino aman-jery. Raha teo amin’ny 1549 ohatra ny andalam-pitsaboana tamin’ny tapaky ny volana mey, teo amin’ny 347 izany tamin’ny 26 mey. Torak’izany koa ny fihenan’ny isan’ny maty raha ny tambatry ny 15 andro indroa farany no itarafana azy. Raha nanakaiky ny 100 izany ny tapa-bolana voalohan’ny mey (1-15 mey), teo amin’ny 59 izany teo anelanelan’ny 16 sy 26 mey. Miisa 822 ny fitambaran’ny lavo hatramin’ny 26 mey. Nambara fa efa mihavitsy ny manatona hopitaly ary antony rahateo nanakatonana ireo toerana sasany natao toeram-pandraisana mararin’ny coronavirus sy hotely-hopitaly. Manodidina ny 200 000 ny fitiliana natao hatramin’ity herinandro ity ary maherin’ny 40 000 ny tranga mitondra ny tsimokaretina.
Tsy mbola vita anefa ny ady na dia eo aza izany isa toa manodoka izany satria ny tranga anivon’ny toeram-pitsaboana ireo namoahana ny isa ofisialy ireo, indrindra fa miditra amin’ny vanim-potoana mangatsiaka mampirongatra ny tsimokaretina isika. Ary mitohy hatrany ny fanentanana amin’ny fanarahana ny fepetra sakana samihafa toy ny fanasana tanana matetika amin’ny rano sy savony na “gel hydroalcoolique/désinfectant”, ny fanaovana maska, ny fanajana elanelana sy ny tsy fitangorongoronana. Ho an’ny firenena sasany any ivelany, dia efa ialana miandalana ny fihibohana sy ny fitondrana maska noho ny fahavitan’ny mponina vaksiny, ary mipetraka tsara ny drafi-panarenana ny fihariana hanampiana ny mponina. Fa misy koa ireo tena mbola ao anaty ady sarotra toa an’i Brezila sy Inde. Ho antsika, efa irosoana ny fanaovana vaksiny “astrazeneca” miainga amin’ilay 250 000 doses avy amin’ilay programa Covax.
Ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana sy dahalo
Ao anatin’ny fitsidihan’ny filoham-pirenena ny any atsimon’ny Nosy tamin’iny herinandron’ny Pantekoty iny no nitokanana ny toby miaramila any Iakora misy ny fotodrafitrasa ilaina amin’ny fitandroana ny filaminana. Nambaran’ny filoha tamin’io fotoana io fa nihena 50% ny tsy fandriam-pahalemana eto amin’ny firenena tato anatin’ny roa taona. Ny alahadin’ny Pantekoty anefa, dia fantatra ny fisian’ny fanafihan-dahalo namoizana aina miaramila 2 sy fokonolona 17 ary fahaverezan’omby hatrany amin’ny 500 tany Midongy atsimo, tsy mifanalavitra amin’Iakora. Teo ihany koa ny fifandonan’ny vahoaka tamin’ny mpitandro ny filaminana tany amin’ny karieran’Andilana Avaratra any amin’ny Faritra Alaotra mangoro, nanapoahana lakrimozena. Ary faritra maro no fantatra fa mbola anjakan’ny dahalo sy mpandroba, tsy mampandry fahalemana ny mponina.
Fivorian’ny Antenimiera ampitain-davitra
Noho ny hamehana ara-pahasalamana, dia amin’ny alalan’ny fivoriana ampitain-davitra no hanatanterahan’ny Antenimieram-pirenena ny fivoriana ara-potoana fanaon’izy ireo. Anisan’ny tao anaty programa ny fifidianana ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena izay nahalany ny depiote Irmah Lucien Naharimamy tamin’ny vato 87 tamin’ireo 97 nandray anjara, avy amin’ny IRD. Teo ihany koa ny fandaniana famatsiam-bola samborina hanatanterana tetikasa samihafa eto amin’ny firenena toy ny avy amin’ny BAD. Mbola tsy fantatra mazava kosa ny amin’ny teti-bolam-panjakana LFR mamaritra ny fandaniana atao eto amin’ny firenena izay antom-pivorian’ny Antenimiera.
Fanendrena sy fanesorana mpiasam-panjakana ambony
Anisan’ny asa tsy miato ataon’ity fitondram-panjakana ity isaky ny fivorian’ny filan-kevitry ny minisitra ny fanesorana sy fanendrena mpiasam-panjakana ambony. Mahazatra moa hatramin’ity hamehana ara-pahasalamana ity, dia fanaovana izany amin’ny alalan’ny “visioconférence” ka ny tamin’ny alarobia 26 mey teo dia ny nanesorana ny tale jeneraly ao anivon’ny minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina sy ny talen’ny TVM no nisongadina, araka ny tolo-kevitry ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina.
Vidim-javatra ilaina andavanandro miaka-bidy
Mampikaikaika ny tokantrano maro ny fidangan’ny vidin-javatra ilaina andavanandro ao anatin’izao hamehana ara-pahasalamana izao, araka ny fampitam-baovao samihafa amin’ny haino aman-jery. Anisan’ny niaka-bidy izaitsizy ny menaka sy ny siramamy. Tafakatra hatrany amin’ny 8000 Ariary ny litatry ny menaka talohan’ny Pantekôty raha latsaky ny 6000 Ariary izany iray volana lasa izay, ary hatrany amin’ny 3200 Ariary ny kilaon’ny siramamy raha latsaky ny 2800 izany iray volana talohan’izany. Ny vary moa na dia efa fotoam-piakaram-bokatra aza, dia manodidina ny 2500 Ariary ihany ny kilao. Milaza ny mpivarotra fa any ampotony any no mahatonga ny fiakarana. Ny mpanjifa maro moa dia mizaka ny tsy eran’ny aina.
Ny mpiara-miombona antoka sy ny Praiminisitra nidinika momba ny “kere”
Nisy ny dinika nihaonan’ireo mpiara-miombona antoka amin’ny fiatrehana ny “kere” any atsimon’ny Nosy sy ny Praiminisitra Ntsay Christian tamin’ny fiandohan’ity herinandro ity teny amin’ny lapam-panjakana Mahazoarivo. Voalaza fa noho ny fahataran’ny fiavian’ny orana no nahatonga ireo trangana “kere” ireo ka ijerena ny paikady maharitra iatrehana azy.
Hafatry ny mpitondra fivavahana noho ny Pantekoty sy vavaka ho fiatrehana ny ady amin’ny valanaretina
Noho ny mbola fikatonan’ny Fiangonana, dia nisy ny hafatra avy amin’ny FFKM noho ny Pantekôty, nankaherezana ny isan-tokantrano manoloana ny fiatrehana ny ady amin’ity valanaretina mamely eto amintsika sy maneran-tany ity. Niantsoana firaisan-kina eo anivon’ny fiarahamonina. Ny Eglizy katolika moa dia manohy isan’andro ny vavaka totoafo isan’andro amin’ny alalan’ny haino aman-jery, amin’izao volan’i Masina Maria izao, amin’ny alalan’ny vavaka Rozery.